Guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari oo lagu dilay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandGuddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari oo lagu dilay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso
August 7, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Magaalo xeebeedka Boosaaso.[Sawirka: Puntland Mirror]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Guddoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil Cabdule oo loo yaqaan (Buncun) ayaa maanta oo Axad ah lagu dilay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso, sida ay ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Buncun ayaa niman hubaysan oo aan haybtooda la garanayn ku dileen gudaha magaalada, iyaga oo goobta ka baxsaday kadib dilka, sida ay wararku sheegayaan.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada dilkaas ilaa iyo hadda.
Haayadaha ammaanka ayaan weli ka hadlin dilka.
Buncun ayaa guddoomiye ku xigeen soo noqday xilligii Cabdisamad Maxamed Gallan uu ahaa guddoomiyaha gobolka Bari.
Magaalo xeebeedka Boosaaso ayaa waxa ka dhacay dilal qorshaysan intii lagu guda jiray bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay.
Midowga Afrika oo ka codsaday Burundi in ay dhinto 1,000 kamid ah ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Midowga Afrika ayaa ka codsaday Burundi in ay dhinto 1,000 kamid ah ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya marka la gaaro bisha Febaraayo ee sanadka soo socda iyada oo qayb ka ah barnaamij tartiib [...]